Iyo Linux Foundation yatosarudza nhengo nyowani dzeTechnical Advisory Board | Linux Vakapindwa muropa
Mamwe mazuva apfuura nhengo dzese dzeLinux Foundation dzakaita chirongwa chekuvhota Izvo akasarudza vanhu vanozove chikamu cheTechnical Advisory Board yakaumbwa nevamiriri gumi venharaunda yeLinux kernel.
Musangano uyu yakagadzirwa pamwechete nenhengo dzakasarudzwa inovavarira kumiririra zvido zvemunharaunda zvine hukama neLinux Kernel, pamwe nekuona chirongwa chekusimudzira mune ramangwana.
Kunze kwavo vanhu vakasarudzwa ndivo vachange vachiona kugadzirisa matambudziko anokanganisa maitiro ekuvandudza kernel Linux uye mukuwedzera pakubata nezvichemo zvese nezve kutyorwa kwe "Code of Conduct" iyo yakagadzwa mavhiki mashoma apfuura.
Sezvo iyo Code of Conduct yakaburitswa mazuva mashoma apfuura yakagadzwa kuti igadzire yakagadzikana uye inobudirira nharaunda yekushandira kune vanhu vari kutarisira Linux kernel budiriro.
Izvo zvakafanira kuve nevashandi vari mukutarisira kuona kuti izvi zvinoitwa uye zvinoremekedzwa. Kana iwe uchida kuziva zvishoma zvishoma nezve iyi kodhi yekuzvibata unogona kushanyira chinyorwa chinotevera.
1 Mhedzisiro yemavhoti eTechnical Advisory Board
2 Vatsva vatsva vapinda
Mhedzisiro yemavhoti eTechnical Advisory Board
Mhedzisiro yesarudzo ya2018 yenhengo dzeLinux Foundation technical Advisory Council Ivo vakaburitswa uye neizvi tinogona kusangana nevanhu vakasarudzwa.
Nhengo dzakasarudza pachiitiko ichi son Chris Mason, Laura Abbott, Olof Johansson, Dan Williams, naKees Cook. Abbott naCook nhengo itsva dzebhodi panguva ino. (Dzimwe nhengo dzeTAB ndiTed Ts'o, Greg Kroah-Hartman, Jonathan Corbet, Tim Bird, naSteve Rostedt.)
Nhengo dzekanzuru dzinosarudzwa kwemakore maviri. Sezvakatumirwa pane ezvinyorwa zvematsamba tinogona kuona zvinotevera:
Sarudzo dzeTAB dzave kukwana. Kutenda kune vese vavhoterwa
kuendesa mazita avo, uye nekutenda kwakawanda kune wese munhu akabatsira kumhanya
Nemavhoti makumi mapfumbamwe nemashanu akavhoterwa, vakwikwidzi vepamusoro vashanu vakagamuchira
Chris Mason 67 mavhoti
Laura Abbott 62 mavhoti
Olof Johansson 53 mavhoti
Dan Williams 47 mavhoti
Kees Cook 45 mavhoti
Anotevera akavhoterwa mumiriri akagamuchira mavhoti makumi mana nemana.
Mhedzisiro yakazara inowanikwa paunokumbira.
Kutenda zvakare kune vese vakapinda muchikamu, uye makorokoto nekutenda.
Vatsva vatsva vapinda
Gore rino, bhodhi rinosanganisira nhengo nyowani, dzatinogona kusimbisa zvinotevera pamusoro pavo:
Laura abbott , que inoshanda paRed Hat pamapakeji ekutsigira neKernel yeFedora, inochengetedza iyo Ion memory manejimendi manejimendi uye inobatanidzwa mukusimudzira inoenderana ne ruoko / ruoko64 uye KSPP (Kernel Self Protection Project) zvivakwa.
Kees Cook, Ndiye Aimbove Principal Kernel.org Saiti Administrator uye Mutungamiri weUbuntu Security Team, ikozvino inoshanda kuGoogle kuchengetedza ChromeOS uye Android. Akazvipira kufambisa kune akakosha anoshanda ekuchengetedza matekinoroji eLinux Kernel.
Kusarudzwazve kwetemu nyowani:
Chris Mason, musiki uye mukuru dhizaini yeBtrfs fileystem. Inoshanda paFacebook;
Olaf Johansson ari kushanda pakutsigira dhizaini yepakati yeARM.
Dhani williams, ndiye NetworkManager yekuvandudza uye madhiraivha easina waya uye nvdimm zvishandiso, inobatanidzwa mukugadzirwa kweiyo mdadm (software RAID) subsystem. Anoshanda kuIntel.
Vamiriri vakasara vakasarudzwa zvakare gore rapfuura, uye gore rino havasi kuzopinda musarudzo:
Ted Ts'o, mumwe wevatangi vekutanga veLinux kernel, iye munyori weiyo ext2 / ext3 / ext4 mafaira masisitimu.
Greg Kroah-Hartman, SUSE mushandi, akatsiga kuburitsa muchengeti, uye maneja weprojekiti yekugadzira mudziyo mudziyo
Jonathan Corbet (Jon Corbet), kernel mugadziri uye munyori weiyo zviwanikwa lwn.net.
Tim Bird, Sony injinjini, nhengo yeboka rakasimudzwa masisitimu ekuvandudza timu uye muchengeti weiyo kernel bvunzo chikuva (Fuego).
Steven Rostedt, mugadziri weiyo ftrace subsystem, anoshanda kuRed Hat kuchengetedza zvigamba nemawedzero ekutsigira realtime modhi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo Linux Foundation yatosarudza nhengo nyowani dzeTechnical Advisory Board